Karazan-tsoavaly | Noti Horses (Pejy 2)
Ny hazakaza-tsoavaly any Angletera dia fomba amam-panao efa an-jato maro, ka tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia tapaka fa hamorona karazana hisongadina: Thoroughbred Horses.
Akhal-Teke, ny firavaka ao Turkménistan
Ny Akhal-Teke, miavaka amin'ny volon'ny metaly amin'ny volony, izany no antony iheverana azy ireo ho hazakazaka tsara indrindra eto an-tany, izy ireo koa dia iray amin'ireo zokiny indrindra.
Ilay soavaly Berber dia fantatra amin'ny anarana hoe soavaly efitra ary iray amin'ireo tranainy indrindra eto an-tany. Notezain'ny Berber tao Maghreb izy.
Ny soavaly Hanoveriana, noho ny mampiavaka azy, dia iray amin'ireo karazany sarobidy indrindra amin'ny fanatanjahantena Equine, miavaka amin'ny akanjo sy mampiseho mitsambikina izy ireo
Ny soavaly arden dia karazam-borona teraka avy any Ardennes, Belzika, Luxembourg ary France. Handinika ny tena mampiavaka an'io karazany io izahay.
Ny karazana soavaly Appaloosa dia iray izay azon'ny Indiana Nez Perce tamin'ny alàlan'ny soavaly niampita tamina toetra manokana toy ny palitaony hita maso.
Ny soavaly Lusitano na soavaly portogey, iray amin'ireo soavaly sadely antitra indrindra eto an-tany
Ny soavaly Lusitano dia iray amin'ireo Thoroughbreds tranainy indrindra ao amin'ny Saikinosy Iberia ary iray amin'ireo soavaly sadely antitra indrindra eto an-tany.
Soavaly fotsy na tordillo, ireo mampiavaka ny palitaony
Ilay soavaly volondavenona dia manana palitao sarobidy indrindra. Ny palitao dia manomboka maizina amin'ny alikaola ary manjary maivana kokoa amin'ny fizotran'ny depigmentation.
Soavaly Criollo: toetra, tantara ary fanarenana
Ny Criollo Horse dia toetra mampiavaka ny Amerikana Cone atsimo, mizara manerana ny kaontinanta ary mivelatra amin'ny fomba samihafa amin'ny firenena tsirairay.
Soavaly amerikanina: karazana lehibe indrindra
Ny soavalin'ireo mpanjanatany Espaniôla sy ireo an'ny firenen-kafa toa an'i Angletera na i Frantsa no fototry ny fiandohan'ny karazan-tsoavaly amerikana.
Ny soavaly Quarter, na soavaly Quarter, dia karazany iray tany Etazonia izay mety indrindra amin'ny hazakazaka fohy.
Ny soavaly Mustang dia ao anatin'ny soavaly dia any Amerika Avaratra, saingy ... fantatrao ve fa avy amin'ny soavaly espaniola izy ireo?
Ny soavaly tsara tarehy indrindra eto an-tany
Ireo biby ireo dia tsara tarehy sy miavaka, na dia misy karazany hafa aza misongadina kokoa amin'ny an'ny hafa taloha. Ho hitantsika ireo soavaly tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Ny soavaly Zaino dia misy karazan-java-mitovy amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny physiognomic ary manana toetra samihafa.
Ny soavaly albino dia biby mahafinaritra indrindra izay manana toetra milamina sy manam-paharetana. Izy io dia namana tsara ho an'ny fianakaviana rehetra. Sahy mahita izany ve ianao?
Ny percherón dia mpamboly ankasitrahana sy ilaina ho an'ny olombelona hatrany noho ny fanoherana sy ny tanjaka lehibe, na dia soavaly mavesatra aza.
Ny karazany Haflinger na fantatra koa amin'ny hoe Aveliñés Pony dia avy amin'ny Arabo sy Tyrolean. Na dia avy any Aotrisy aza ny fiaviany, avy any an-tendrombohitra Tyrol.
Ny ra arabo dia ao anatin'ny karazana soavaly maoderina
Ny teny filamatra amin'ny firazanana Arabo madio dia: 'Arabo marolafy'. Amin'ity teny filamatra ity, farafahakeliny karazana soavaly maoderina folo no azo ampidirina ao.
Soavaly Falabella, karazana tsy pony
Ny soavaly Falabella dia tsy pony, na dia mitovy aminy aza. Soavaly kely tena malaza ity izay…
Ilay soavaly Holsteiner dia teratany Schleswig-Holstein any avaratr'i Alemana. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo karazan-dra tranainy indrindra amin'ny ra mahonon-tena.
Ny soavaly arabo no karazany tranainy sy madio indrindra izay misy firaketana. Hazakazaka voalohany, noho izany.
Ilay soavaly fantatra amin'ny anarana hoe Tinker, dia karazan-tsoavaly matanjaka sy mora tohina izay manana ny tantarany isan-karazany mitovy amin'ny palitaony ihany koa.
Ny soavaly arabo anisan'ny karazany faran'izay madio indrindra
Ny soavaly arabo no karazan'omby madio tranainy indrindra, nandray anjara tamin'ny famolavolana ny tantaran'ny Equine, ary koa fomba fiaina iray.
Karazam-borona, soavaly efitra
Ny karazany Berber dia fantatra amin'ny anarana hoe soavaly efitra, satria, taloha, dia tsy maintsy nandeha lavitra izy ireo acclimatizing ny hafanana sy ny fifadian-kanina.
Famoronana ny hazakazaka Aztec
Ny famoronana ny hazakazaka Aztec dia nanomboka tamin'ny 1969 tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa mitaingin-tsoavaly Texcoco. Ity karazana ity dia manana lakroa eo anelanelan'ny ra Andalusian sy ny iray kilaometatra kilaometatra.
Clydesdale karazany, hatsarana ary nofinofy
Ny karazana soavaly fantatra amin'ny anarana hoe Clydesdale dia mitondra antsika mirindra ny angano sy ny nofinofy miaraka amin'ny hatsarany sy kanto mahavariana.
Karazany Noric: toetra sy toetra mampiavaka azy
Ny karazana soavaly norika, na dia tsy dia be mpahalala aza, dia mahazendana izay rehetra mindrana tena ...
Ilay soavaly Breton mavesatra
Ity karazana soavaly mavesatra fantatra amin'ny anarana hoe Breton ity, dia mendrika tantaran'ny mpanjaka lehibe, mendri-piderana sahady ...
Miaraka amin'ny anarana mediteraneana toy izany, ny karazan-javamaniry fantatra amin'ny anarana hoe soavaly italiana dia iray amin'ireo karazany ...
Ny karazany Kabardin dia soavaly fakan-tahaka, manana rà mafana ary miavaka amin'ny fahombiazany lehibe amin'ny ...
Ny karazany Hackney dia soavaly mpandatsa-drà izay tanjona matetika indrindra dia ny hazakazaka, ny ...
Soavaly Fjord Norveziana
Ny soavaly Fjord norveziana dia karazana soavaly misongadina amin'ny fanao amin'ny akanjo, ...
Gipsy Vanner, soavaly mora zaka indrindra ho an'ny ankizy
Fantatrao ve ilay soavaly gipsy vanner? Jereo hoe maninona no raisina ho soavaly be indrindra ho an'ny ankizy izany. Lazainay aminao ny mampiavaka azy, ny fitondrantenany, ny niandohany ary maro hafa!
Soavaly fitetezana tratra na soavaly frantsay
Ny karazana soavaly trotter frantsay na soavaly soavaly, dia karazany avy any Frantsa izy io ary ...
Ilay soavaly Tarpan tena izy na fantatra amin'ny hoe soavaly dia
Ny soavaly Tarpan dia lany tamingana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary io no iray amin'ireo karazam-borona tranainy indrindra izay nisy toy ny soavaly dia.
Ny Anglo-Arabo dia nanjary nahay tamin'ny atletisma
Ny hazakazaka Anglo-Arabo dia miavaka amin'ny fiaretany, ny fiainany, ny hafainganana ary ny hafainganana.
Karazana shire: soavaly matanjaka sy mahatohitra
Soavaly mahery sy mahatohitra ny karazany Shire ary na dia tsy mailaka aza izy ireo dia omen'ny hery lehibe ananany.
Ny soavaly Mallorcan dia karazana Mallorca ary izy amin'izao fotoana izao, na eo aza ny lakroa isan-karazany, dia azo atao ny mankasitraka sy mitazona azy.
Tantara sy fiavian'ilay soavaly arabo
Ny soavaly arabo dia karazana an'arivony taona nonina tany Arabia tany am-boalohany ary nitaingenan'ny Bedouins.
Ny soavaly arabo dia iray amin'ireo karazana tranainy indrindra, misy rà mandriaka ao amin'ny ankabeazan'ny hazakazaka maoderina.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka ny karazana albino.
Ahoana ny fanasokajiana soavaly
Ilay soavaly Paso Fino any Kolombia
Any Arzantina dia miteraka soavaly kely indrindra eto an-tany izy ireo